ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ တရုတ်-အာရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်ရလာ - Xinhua News Agency
ရင်ချွမ်း၊ ဩဂုတ် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှဟွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် ရင်ချွမ်းတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေး အလေးထားလျက် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာရပ်ကုန်စည်ပြပွဲအား ဩဂုတ် ၁၉ ရက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် အွန်လိုင်း (online) ရော အော့ဖ်လိုင်း (offline) ဖြင့်ပါ လေးရက်ကြာပြုလုပ်မည့် အဆိုပါ ပြပွဲတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ ရေအရင်းအမြစ်များ၊ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး၊ အစိမ်းရောင်စားသောက်ကုန်၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲများနှင့် ဖိုရမ်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ပြပွဲတွင် အော့ဖ်လိုင်းနှင့် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သည့် ပြပွဲများအတွက် ပြခန်းပြသသူများအဖြစ် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁,၀၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ စွမ်းအင်သစ်၊ ဉာဏ်ရည်တုနှင့် အခြားသော ပေါ်ထွန်းစနယ်ပယ်များတွင် ယင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထပ်မံတိုးချဲ့သွားရန် ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Qian Keming က ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာရပ်နိုင်ငံများသည် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ကူညီလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဖလှယ်မှုမှာလည်း အဆင့်သစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း Qian က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်-အာရပ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၉.၄ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံက အာရပ်နိုင်ငံများမှ ရေနံစိမ်း တန်ပေါင်း ၂၅၀ သန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှု၏ ထက်ဝက် တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းအင်းများအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ တင်သွင်းမှုများသည်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၂.၉ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ယမန်နှစ်ကထက် ၂.၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း Qian က ဆိုသည်။
“ရာစုနှစ်အတွင်း ကပ်ရောဂါနဲ့ မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရင်းဆိုင်ရင်း တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတို့ဟာ အခုအခါမှာ လက်ချင်းတွဲလျှောက်လှမ်းဖို့နဲ့ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှာဖွေဖို့မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှုများ ရှိလာသလို စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနဲ့ နက်ရှိုင်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အဆင့်သင့်ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး တရုတ်နိုင်ငံကောင်စီနှင့် နင်းရှ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရတို့ ဦးစီးကျင်းပသော အဆိုပါ ကုန်စည်ပြပွဲက ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၀ ခန့်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၅,၀၀၀ ကျော်အား ဆွဲဆောင်ထားခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း ၉၄၀ ခန့်ကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Saad Eddine El Othmani က အာရပ်နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးများတွင် လိုက်ဖက်ညီပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျယ်ပြန့်သောအမြင်များ ရရှိလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ မော်ရိုကိုနိုင်ငံအနေဖြင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် (BRI) တွင် တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ကြီးမားသော တိုးတက်မှု မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တူနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များ၌ နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း တူနီးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Othman Jerandi က ပြောခဲ့သည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျ ရေနံကုမ္ပဏီ အဆင့်မြင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mohammed Y. Al Qahtani ကလည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ သန့်ရှင်းသော အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့နှင့် ကာဗွန်တို့အား အကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း၌ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
YINCHUAN, Aug. 19 (Xinhua) — The fifth China-Arab States Expo opened Thursday in Yinchuan, capital of northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, focusing on economic and trade cooperation and the co-building of the Belt and Road.
China, now the Arab states’ largest trading partner, has the confidence to further expand cooperation with the countries in the digital economy, new energy, artificial intelligence, and other emerging fields, said Chinese Vice Commerce Minister Qian Keming via videolink at the opening ceremony.
According to statistics of the ministry, China-Arab trade volume reached 239.4 billion U.S. dollars in 2020, during which China imported 250 million tonnes of crude oil from Arab states or half of the country’s total crude oil imports last year.
“Facing the pandemic and the great change unseen inacentury, China and Arab states now have more urgent needs than ever to walk hand in hand and seek common development, as well as tap the business opportunities and deepen cooperation,” he added.
Moroccan Prime Minister Saad Eddine El Othmani said via video that Arab countries and China are highly complementary in their economies and enjoy broad prospects for cooperation. He noted that Morocco has actively participated and playedaconstructive role in the Belt and Road Initiative (BRI) and has seen great progress in the country’s infrastructure.
Tunisia expects to deepen cooperation with China in areas like tourism and the digital economy, Tunisian Foreign Minister Othman Jerandi said.
Mohammed Y. Al Qahtani, senior vice president of the Saudi Arabian Oil Company, said they expect to cooperate with China in clean hydrogen, clean ammonia, and carbon capture utilization and storage. Enditem
Photo : Guests attend the fifth China-Arab States Expo in Yinchuan, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, Aug. 19, 2021. The four-day event will feature trade fairs and forums on digital economy, clean energy, water resource, modern agriculture, green food, cross-border e-commerce and tourism cooperation. (Xinhua/Wang Peng)